WWDC 2021 oo layaab leh: homeOS ma noqon doontaa nidaam hawlgal oo cusub? | Wararka IPhone
Waxyaabaha layaabka leh ee horseedka u ah WWDC 2021 Iyagu ma joogsan doonaan ilaa bilowga shirka laftiisa. Xanta ku saabsan laba MacBooks cusub ama dhammaan wararka isbeddelka xagjirka ah ee iPadOS iyo iOS 15 ay la wareegi doonaan daboolida maalmihii la soo dhaafay. Xaqiiqdii, cunsur cusub ayaa soo galay dagaalka: homeOS. In a dalab shaqo la dhajiyay saacadihii ugu dambeeyay, Apple waxaa loola jeedaa nidaam hawlgal oo cusub oo suurto gal ah oo leh magacaas, kaas oo naga dhigaya inaan ka fikirno saddex walxood: Apple TV, HomePod iyo HomeKit. Si kastaba ha noqotee, dalab ayaa wax laga beddelay iyadoo laga saaray magaca homeOS. Apple muxuu ku socdaa?
HomeOS miyey noqon doontaa mid dhab ah WWDC 2021?
Waxaad la shaqeyn doontaa injineerada nidaamyada Apple, waxaad baran doontaa macruufka macruufka, watchOS, tvOS, iyo homeOS, waxaadna ku hagaajin doontaa lambarkaaga waxqabadka qaababka kaliya ee Apple awood u yeelan karto. Ku soo biir kooxdeena oo isbeddel dhab ah u samee kuwa jecel muusikada adduunka.
Kooxda 'Apple Music‌ Frameworks' waxay leeyihiin teknolojiyad u oggolaanaysa Apple Music‌ waayo-aragnimada lagu dhex daray nidaamka dhammaan barnaamijyadeenna moobiilka: iOS, watchOS iyo homeOS.
Aragtiyadu waxay bilaabaan inay kasoo muuqdaan shabakadda isla waqtigaas shaqo la weydiinayo. Waxaa jira laba mala-awaal oo waaweyn oo ku saabsan homeOS. Marka hore, Apple waxaa laga yaabaa inuu doonayo inuu qaato quudinta iyo daah-fur nidaam hawlgal oo cusub taas oo koobeysa dhammaan howlaha la xiriira otomatiga guriga. Ama inaad maskaxda ku hayso inaad soo bandhigto shey u baahan inuu yeesho is dhexgalkiisa. Ama sidoo kale waa suurtagal in ay ka dhigtay nidaamka aaladaha saddexaad, wax aan ku habboonayn fikirka tufaaxa weyn. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood waa aragtiyo.
Aragtida kale ayaa lagu qaabeeyey gudaha isbedel ku yimid magacyada nidaamyada hada shaqeeya sidii ay ku dhacday macruufka loogu talagalay iPad-ka ee ku dhammaaday in loogu yeedho iPadOS ama Mac OS X oo ku dhacay in lagu magacaabo macOS. Apple waxay u egtahay inay rabto inay jaangoyso magacyada nidaamyadeeda shaqo dhamaan alaabteeda.
Dhinaca kale, saacado kadib buuq oo laga soo saaray shaqo bixinta, Apple waxay wax ka bedeshay dalabkii shaqo iyadoo laga saaray erayga homeOS. Waxaa bedelay HomePod iyo tvOS, iyagoo iska ilaalinaya inay bixiyaan tilmaamo dheeraad ah oo ku saabsan sababta keentay dib u dhaca. Intaas waxaa sii dheer, waxay u badan tahay inay xiisad ka dhalisay xarunta Cupertino.
Si kastaba ha noqotee, ma cadda aaladaha gurigan cusub ee OS uu la xidhiidhi karo. Bixinta shaqada, waxay umuuqataa inay inbadan xiriir la leedahay nidaamka mobilada sida watchOS iyo iOS marka loo eego sheyga desktop-ka sida macOS. Laakiin sida aynu nidhaahno, dhammaantood waa fikrado illaa laga gaarayo Juun 7, furitaanka WWDC 2021 shakiga oo dhan waa la cadeeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » WWDC 2021 » WWDC 2021 oo layaab leh: homeOS ma noqon doontaa nidaam hawlgal oo cusub?
Mark Zuckerberg wuxuu xaqiijinayaa inaan dhawaan WhatsApp ku yeelan doonno isku dhufashada badan